Yusuf Garaad: Borame iyo Soo Noqosho - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Kow iyo Tobnaad
Borame iyo Soo Noqosho - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Kow iyo Tobnaad
Hargeysa waxaan uga gudubnay Gabiley. Waxaan magaalada soo galnay iyada oo roob aad u xooggani uu da’ayo. Magaalo aadan aqoon, qof waddada socdaana aanuu jrin oo roob laga okoranayo ma ahayn sida ugu sahlan ee howl looga fulin karo.
Waxaan tagnay Dukaan, ka dibna waxaan xusuustaa in guri naloo tilmaamay oo aan waraaq geynay.
Markaas ka dib Borame ayaan u gudubnay.
Wadaddadii laamiga ahayd ee marna wanaagsanayd meelaha qaarna dayactir u baahnayd ee aan Muqdisho ka soo qaadannay waxay nooga dhammaatay meel u dhexeysa Gebiley iyo Borama. Ma hubo in aay ahayd Dila’ iyo in ay ahayd Gorayo-Cawl.
Waxaan galnay waddo aan laami ahayn. Waa dhul dhagax ah. Xawaaraha uu gaarigu ku socon karo aad ayuu isu dhimay.
In yar ka dib ayaan tagnay Borame. Waa magaalo dhagax miiran ah, ku dhex taalla Buuro waawweyn oo dhagax ah, iyada lafteeduna kala sarreysa. Xilliga roobka waa degaan aad u qurux badan. Dhulka aflaamta qaar aan ka daawaday, siiba aflaamta Cowboy-ga lagu jilo ayaan soo xusuustay.
Waxay ahayd magaalo aad u dad badan.
Buur la yiri way guuxdaa xilliyada qaarkood ayaan arkay oo aan magaalada ka fogeyn. Aad ayaan ula yaabay.
Waxaan markiiba soo xusuustay in hadda degaankaas uu dhul gariir ka dhacay. Waxaan markaa u qaatay in laga yaabo in buurta uu hoos jiifo lava aan dibadda u soo bixin.
Mas’uuliyiinta Dowladda ee Borame ayaan kulannay, Saldhigga Booliiskana waan tagnay. Waxaan u fasirnay howsha aan Borame u nimid. Sida aan dooneynay gacan ugama aynaan helin iyada oo sababtu ahayd arrimo kale oo magaalada markaa ka taagnaa oo ay ku mashquulsanaayeen. Waan ka qanacnay.
Si kastaba ha ahaatee howsheennii waa ay noo qabsoontay.
Borame iyo guud ahaanba Gobolka Awdal, safarkaas wax badan kamaan fahmin. 1990 ayay ahayd markii aan baadiyaha Gobolka ku wareegay oo aan baabuur ku tegey Weeraar oo aan habeen ku hoyday.
Socdaalkeygii Qol-u-jeed, Xaliimaale, Boon, Weeraar, Ruqi, Beysaarre iyo Baki, waxaa igu wehliyay Alard du Bois-Raymond oo markaa aan ICRC ka wada tirsaneyn oo madax u ahaa xafiiska Borame. Markii dambe wuxuu noqday madaxa Laanta Socdaalka ee dalka Switzerland.
Socdaalkaas oo ahaa kii iigu horreeyay ee aan baaddiye shaqo u tago, haddii Eebbe idmo qoraal ayaan mar kale uga warrami doonaa.
Mar kale iyo waddadii dheereyd
Borame marka aan ka bogannay waxaa halkaa nooga billowday in aan waddadeennii dib ugu laabanno. Magaalo kasta oo aan soo marnay oo aan waraaqaha maxaabbiista uga soo tagnay waa in aan dib ugu laabanno si aan u hubinno inta waraaqood ee ay suurta gal noqotay in qoysaskii ay u socdeen la gaarsiiyay, ka dibna aan uga qaadno jawaabaha u socda Maxaabbiista.
Markaas ayaan Hargeysa ku noqonnay annaga oo Gebileey sii marnay. Habeen kale ayaan Hargeysa joognay. Maalintii xignay ayaan socdaalkii sii wadannay. Waxaan u hoyannay Shiikh si aan uga baaqsanno kuleylka Berbera.
Madaxa Idaacadda Hargeysa ayaa waraaq iigu qoray Guddoomiyaha Shiikh oo ay saaxiib ahaayeen. Guri dhismihiisu ka duwan yahay magaalada ayaa nala dejiyay. Berigaas aqoon uma lahayn laakiin hadda marka aan dib uu fiiriyo waxaan u maleynayaa nooca dhismaha Victorian in uu ahaa. Waxaan xusuustaa markii aan gudihiisa galnay in Beatrix ay markiiba billowday ma moodeyn guri noocan ahi in uu halkan ku yaallo oo ay fiiro ugu dhaqqaday marba meel gooni ah.
Waa guri aan markaa mid kale ka dambeyn oo ku dhow meel hoobad ah. Dhir dabiici ah ayaa ka dambeysa.
Runtii waa meel haddii adeeg wanaagsan loo yeelo noqon kartay goob nasasho ama dalxiis loo tago.
Waa guri uu degganaan jiray sida la ii sheegay ninkii Ingiriis ee degaankaa ugu sarreeyay xilligii gumeysiga.
Maalintii xigtay ayaan socdaalkeenna sii wadannay. Burco, Caynaba iyo Laas Caanood ayaan midba mar ku hakannay. Annaga oo ku talo-galkeennu yahay in aan aroorta u baxno Qardho iyo Boosaaso ayaan habeenkaas u hoyannay Garowe.
Markii aan Garowe soo galnay, Hotel degnay, oo aan qubeysannay ee casho u soo baxnay ayaan arkay darawalkii baabuurka oo sita shandaddiisii oo aniga i sugaya.
Wuxuu ii sheegay in aanuu Boosaaso noo raaci doonin oo uu isla caawa Muqdisho aadi doono.
Waxaan weydiiyay sababta oo aan u qaatay cabasho aniga ama Beatrix nagu saabsan in uu sheegan doono. Waxaan is lahaa aad ka xallisid. Laakiin arrinka uu sheegtay sidaa ma ahayn.
Wuxuu yiri shaqo uu arji u qortay inta aanuu Xamar ka soo bixin ayuu hadda Radio Muqdisho ka maqlay in dadkii araajida soo qortay loo yeeray. Waxaa loo sheegay in ay imtixaan u yimaadaan Garoonka Kubbadda Cagta ee Banaaddir.
Mowjadaha gaa-gaaban ee Radio Muqdisho waxaa berigaas laga dhegeysan jiray dalka oo dhan, waddammada deriska ah iyo Khaliijka. Waxaa kale oo aan xusuustaa in dad Roma naga dhegeystay ay waraaq noo soo direen.
Darawalkii aniga oo arkaya ayuu ku dhacay gaari isjiid ah oo Muqdisho u baxaya.
Waa Garowe. Beatrix iyo aniga ayaa isku soo harnay. Berri waxaan rabnaa in aan aadno Boosaaso. Waa waddadii aan darteed u soo kaxaysannay darawalka, isagiina waa naga tegey.
Waxaan isku soo qaadnay in aan darawal ka raadsanno magaalada. Haddana waa ay nala noqon weyday. Waxaan goosannay in aan labadeennu isku qaadno waddada dheer ee isku xirta Garowe iyo Boosaaso oo inteeda badan aan weli markaas laami la saarin.
Berri subax waxaa na sugeysa waddada Qardho.
Posted by Yusuf Garaad at 19:27:00